Degdeg:- MD Karaash oo gaaray deegaankii dhawaan ay qabsadeen Alshabaab + Kulamo uu la qaatay…
June 11, 2019 Xafiiska Puntland Somalia, Wararka Maanta 1
Madaxweyne ku xigeenka Puntland isla markaana ah Ku-simaha Madaxweynaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa gaadhay degaanka Af-urur ee Gobolka Bari.
Wafdiga ayaa kulama la qaatay Ciidamada iyo Bulshada ku dhaqan degaankaas…..
Isbahaysiga hoose ee teer iyo doorashadii Cabdi Weli Gaas magaca beelaha Cismaan Maxamuudka iyo Cumar Maxamuudka lagu duufsaday weeye waxa wali Puntland sidan xun u qasaya ee laga ma maarmaan ay iminka tahay in toos looga takhaluso. Isbahaysigani waa mid xaq daro iyo caddaalad xumo ku salaysan oo qaladaad siyaasadeed iyo dhaqameed ba ay ka dhasheen oo runtii ah isbahaysi beelweynta Majeerteen isku sumeynaya in kasta oo dusha laga dadayo.
Waxii aad qarsataa way ku qudhunsadaan ee waxaa hadda daruuri ah in khilaafka beelweynta Majeerteen ee sii xoogeysanaya ee uu isbahaysigaasu ka dhex aloosay sida oogu dhakhsaha badan loo soo afjaro. Waxaa qaladaadkaas straatijiga ah ee dhaawaca sababay in xulufada ay Cadde Muuse oo magaca Cismaan Maxamuud afduubtay iyo Cabdi Weli Gaas oo magaca Cumar Maxamuud afduubtay xasaanadda Boqorka Daarood ninkii xaqa u lahaa inta ay ka dhaxal wareejiyeen walaalkii oogu caleema saaray. Ku dar faragalinnada ay Gaas iyo Deni ku sameeyeen maamullada hoose ee deegaanada Bari, Nugaal iyo Mudug ba.
Puntland geyi ahaanteeda iska daa ee waxay halis xuni soo waajahday tolnimada tolweynaha Puntland wada dhistay ee ku na dhaqan qudheeda oo haddii aan degdeg wax looga qabanin aanay labadu ba sii jiri doonin xaqiiqdii. Is ximintan ay xulufadan aan soo magacaabay Maxamuud Saleebaanka iyo beelweynta Majeerteen ka dhex huriyeen waa qori dab leh ee ay Labadaryaalka Puntland ku dhex tuureen. Inta aanu dabku qabsanin waa in dhakhsa la dammiyaa oo tolka miyirka qabaa ay xaajada soo dhex galaan.